February 2014 - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
တေးသံရှင်မေသူ၏ သာယာတဲ့ကမ္ဘာစီးရီး မတ်လ ၆ ရက်ထွက်မည်
ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် အချစ်သီချင်းများစွာ ပါဝင်သော သာယာတဲ့ကမ္ဘာ စီးရီးကို မတ်လ ၆ ရက်နေ့မှစတင်ပြီး ရတနာမြိုင် တေးသံသွင်းမှ စတင်ဖြန့်ချိတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း တေးသံရှင် မေသူက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
“ဒီစီးရီးက ညီမရဲ့ ဒုတိယမြောက် စီးရီးပါ။ ဒီခွေထဲမှာတော့ အဆွေးသီချင်းတွေ လျှော့ပြီး မြူးမြူးကြွကြွနဲ့ ကလို့ကောင်းမယ့် သီချင်းလေးတွေကို ညီမ ဦးစားပေး ထည့်ထားတယ်။ သီချင်းတွေထဲမှာ လွှမ်းပိုင်နဲ့ စုံတွဲဆိုထားတဲ့ အဖြည့်ခံလူဆိုတဲ့ သီချင်းလေးက ပရိသတ်တွေ အတွက်လည်း ထူးခြားမှာပါ။ သူက ပုံမှန်ဆို Rap တွေ ဆိုတာများပေမယ့် ညီမက Pop သီချင်းလေးပဲ ဆိုချင်တယ်လို့ တောင်းဆိုထားတဲ့အတွက် ကူညီပြီး ဆိုပေးထားပါတယ်” ဟု ၎င်းကထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
သာယာတဲ့ကမ္ဘာ စီးရီးတွင် သီချင်းများကို တေးရေး ဇဝါ၊ စံပီး၊ ရေမွန်၊ အောင်လ၊ ဒီယံ၊ သားသား၊ ဘန်နီဖြိုး၊ လွှမ်းပိုင်၊ စောရှိုင်း၊ ဇင်ဗိုတို့က ရေးသားပေးထားပြီး တေးသံရှင် ဟဲလေး၊ လွှမ်းပိုင်နှင့် ဉာဏ်လင်းအောင်တို့က စုံတွဲပါဝင် ကူညီသီဆို ပေးထားကြောင်း၊ စီးရီးအတွက် ဗီစီဒီကို မတ်လကုန်တွင် စတင်ရိုက်ကူးရန် စီစဉ်ထားပြီး ဖြန့်ချိသည့် အချိန်တွင် ထူးခြားသည့် အစီအစဉ်များနှင့် ဖြန့်ချိသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သီချင်းများကို တေးရေးဆရာများက အကောင်းဆုံး ရေးပေးထားသလို၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကြိုးစား သီဆိုထားသည့်အတွက် ပရိသတ်များ၏ အားပေးမှုကို မျှော်လင့်ကြောင်း မေသူက ဆိုသည်။
“ဒီစီးရီးထဲမှာ သူ့အသံနဲ့လည်း လိုက်မယ့်၊ လူငယ် ပရိသတ်တွေ အတွက်လည်း အဆင်ပြေမယ့် သီချင်းတွေကို သူနဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပြီး ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ သူက သီချင်းလည်းဂျီး (ချေး) များတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဖြစ်ချင်တဲ့ အရာလေးတွေကို တေးရေး ဆရာတွေ သေချာပြောပြတယ်။ တကယ်ကြိုးစားပြီး လုပ်ထားတဲ့ ခွေလေး ဖြစ်တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်အဟပ် တည့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ယင်းစီးရီးကို တာဝန်ယူ စီစဉ်ပေးသည့် တေးရေးဆရာ နေထိုက်စိုးက ပြောကြားသည်။
ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို အကြောင်းပြု၍ မှတ်တမ်းတစ်ခု အဖြစ်ပြော ဆိုလေ့ရှိသည်။ ရထားလမ်းဖောက် သည့်နှစ်က၊ လေပြင်း တိုက်သည့်နှစ်က၊ ကျောင်းရေစက်ချတဲ့နှစ်က၊ မီးလောင်တဲ့နှစ်က စသည်ဖြင့်မှတ်တမ်း အဖြစ်ပြောဆိုကြရာတွင် ဂန့်ဂေါမြို့နယ်သူ၊ မြို့နယ်သားများပြောဆိုလေ့ရှိသောစကားမှတ်တမ်းများထဲ၌ ရေကြီး လျှံတဲ့နှစ်ကဟူသော မှတ်တမ်းလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
၁၉၆၈ ခုနှစ်က မြစ်သာမြစ်ရေမှာ အမြင့်ဆုံး စံချိန်း တင်ရေကြီးရေ လျှံမှုဖြစ်ခဲ့ရာ ကျေးရွာ များသို့ရေလျှံ တက်သဖြင့် အမြင့်ပိုင်း သို့ပြောင်းရွှေ့နေ ထိုင်ကြရ သည့် ကျေးရွာများ အနက် အောင်မြင်ကျေးရွာသည်လည်း တစ်ရွာအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ကျေးရွာဟောင်းအရပ်ဖြစ်ခဲ့သည့်နေရာ(ရှောက်ပင်ရွာ)တွင် ဘုရားစေတီများ ကျန်ခဲ့ရာ အောင်မြင်ရွာနေ ပြည်သူများက အဆိုပါဘုရားစေတီများအား မွမ်းမံပြင် ဆင်ခြင်း၊ အနေကဇာတင်လှူပူဇော်ခြင်းတို့နှင့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယ ပွဲတို့ကို နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက် လျှက်ရှိကြသည်။ ယခုနှစ်တွင်ကျင်းပသည့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲတော်၌ အသံမစဲမဟာ ပဌာန်းပွဲကိုပါထည့်သွင်းကျင်းပပူဇော်ရာ ပဌာန်းပွဲ စတင်ကျင်းပသည့်နေ့တွင် စေတီတော်အတွင်းရှိ ဘုရား ဆင်း ထုခေါင်းတော်တွင် ပျားများအုံဖွဲ့ကြောင်းနှင့် ပွဲတော်ကျင်းပစဉ်ကာလတွင် ရာသီ ဥတုမှာ ထူးခြားစွာ သာယာမှုရှိကြောင်း၊ ပွဲတော်ကျင်းပပြီးသည်မှာ တစ်လကျော်ကြာပြီးဖြစ်သော် လည်း ဘုရားဖူးများလာရောက် ဆဲဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်သည်ဟု ယုံကြည်မှုဖြင့် လာရောက်ဖူးမြှော်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဗီယမ်နမ်အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဟိုချီမင်းနှင့်အတူ တယောထိုးခဲ့ဖူးသည့် တယောဦးတင်ရီ
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း ၃ဝကျော်လောက်ကတည်းက မြန်မာသံစဉ်နှင့် အနောက်တိုင်းသံစဉ်တို့ကို ပေါင်းစပ်၍ အော်ဂတ်စထရာတီးဝိုင်း ထူ ထောင်ကာဂီတပွဲများ၊ ဧည့်ခံ ပွဲများ၊ မင်္ဂလာပွဲများ၊ ညစာစား ပွဲများတွင် ဖျော်ဖြေတင်ဆက် ခဲ့ကြသည့်တယောဦးတင်ရီနှင့် အဖွဲ့တူရိယာဝိုင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီးတယောပညာရှင်ဦး တင်ရီအား တွေ့ ဆုံမေးမြန်းဖြစ် ခဲ့သည်။ စတင်ဖွဲ့ စည်းချိန်တွင် အခက်အခဲများစွာနှင့် ရင်ဆိုင် ခဲ့ရပုံများကို တယောဦးတင်ရီက
“ဆရာရွှေပြည်အေး၊ ဆရာ ဦးလှထွဋ်၊ ဆရာဦးကိုကို၊ အေ
ဝမ်းခင်မောင်တို့နဲ့ စတင်ပြီး တီးခဲ့တာပါ။ အဲဒီလိုဆရာကြီး တွေနဲ့ လိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ အယူအဆလေးတွေ သင်ရင်း ကြားရင်းတီးခဲ့တယ်။ နောက် ပိုင်းကျတော့ သူတို့ ဆီလိုက် မတီးတော့ဘဲ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်တယောဝိုင်းဖွဲ့လိုက်တယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်က မြန်မာ့အသံမှာလုပ်တယ်။ တယော ၄၊ ၅၊ ၆ ယောက် လောက်နဲ့ ချယ်လိုတို့၊ ဘေ့စ်တို့တိုက်နေတော့ လူတွေက ကျွန်တော့်ကို မြန်မာသီချင်း တွေကို အင်တာနေရှင်နယ်နဲ့ ဘာတွေလုပ်နေမှန်းမသိဘူး ပြောတာခံရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်မပျက်ဘူး။
မြန်မာ့အသံတီဗီနှစ်ပတ်လည် လေးနှစ်မြောက်တဲ့အချိန်အခါ မှာ ကျွန်တော်က ကိုသစ္စာကို တိုင်ပင်ပြီးတော့ တစ်ဝိုင်း လောက်ပေးပါလို့ တောင်းပြီး ကျေးစေတမန်တို့ ဘာတို့ကို အင်တာနေရှင်နယ်နည်းနဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့ တီးခဲ့ တယ်။ အရေးအခင်းမတိုင်ခင်၁၉၈ဝလောက်ကပေါ့။ ပရိသတ် က တော်တော်ကျေနပ်သွားပုံရ ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်အခါ တုန်းက မင်းသားကြီးဝင်းဦးနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့စကားများထား တယ်။ အဲဒီအချိန်အခါမှာ အဲဒါ လေး ထလုပ်လိုက်တော့ မင်းသား ကြီး ဦးဝင်းဦးက သတင်းစာ မှာ ဘာရေးလိုက်လဲဆိုတော့သဲကန္တာရ မှာစမ်းရေကြည်လေး တစ်ပေါက် သောက်လိုက်ရသလိုပဲ။ အင်မတန် အေးမြပါတယ်ဆိုပြီးတော့ ရေး လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီက စတာ ပေါ့”ဟုဆိုသည်။
အော်ဂတ်စထရာတီးဝိုင်း များ ရှားပါးသောခေတ်၌ စတင် လှုပ်ရှားခဲ့သည့် တယောဦးတင် ရီနှင့်အဖွဲ့ တူရိယာဝိုင်း၏ အဓိကဖန်တီးချင်သည့် ဂီတ အကြောင်းများနှင့် မည်ကဲ့သို့ ဖန်တီးခဲ့ရပုံများကိုလည်း “မြန်မာ သီချင်းတွေကို Classical ဖြစ် အောင်ဖန်တီးချင်တယ်။ Rhythm Section ပါရမယ်။ Harmony Section ပါရမယ်။ Melody လည်း မပျောက်ရဘူး။ အဲဒီလို ဥစ္စာကို တယောနဲ့ ဖန်တီး တဲ့အခါမှာ တစ်ခုတစ်ခုကို တော်တော်ဖန်တီးရပါတယ်။
တယောဝိုင်းဆိုတာဂစ်တာကော့ဒ် ပေးသလို မဟုတ်ဘူး။ တစ်လုံးချင်းတိတိကျကျပေးပြီးတော့မှ တီးရတာ။ ညီအောင်လည်း တော်တော်တိုက်ရပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် ကျွန်တော်က အဆိုနဲ့ သိပ်မတီးဖြစ်တာပါ။ အော်ဂတ်စထရာဆိုတာဟာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဆရာမြို့မငြိမ်းပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းကျွန်တော်စလုပ်ခဲ့တာပါ” ဟုတယောဦးတင်ရီက ပြောသည်။
ဂီတကိုလေ့လာလိုက်စားလိုသူ ဝါသနာရှင်များအတွက် တယောဦးတင်ရီဦးစီးသော ဂီတသင်တန်းတွင် တယော၊ စန္ဒရား၊ အဆို၊ ဂစ်တာ၊ ပန်းချီတို့အား သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါသင်တန်းမှ ပညာ ရှင်မျိုးဆက်သစ်များအားမည်သို့ မွေးထုတ်ပေးနေသည်ကို တယော ဦးတင်ရီက
“ကျွန်တော်သင်ပေးတာက သူတို့လိုက်စားချင်တာ၊ သူတို့လုပ်ချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော် မပြောဘူး။ လမ်းကြောင်းက ဒါဆိုတာ ဦးတည်ပေးတာပါ။ ဝါသနာအရ လေ့လာတာရှိမယ်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရ လေ့လာတာရှိမယ်။ ကျွန်တော့်ဆီလာတဲ့ သူတွေကို အပျော်တမ်းသင်မယ်ဆိုရင်မလာနဲ့။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လာခဲ့ပါလို့ပြောတယ်။တွဲသင်ပေးမယ်။ အဲဒါထက်မက နိုင်ငံခြားမှာ သွားပြီးတော့ ပညာသင်ချင်တာလား၊ ရတယ်။ ဒီကနေ စာမေး ပွဲ ဖြေမှာလား။ သင်ပေးမယ်။ ဖြေနိုင်အောင်သင်ပေးလိုက်မယ်။ အဲဒီလို သင်ပေးလို့ N.U.S မှာ ၂ ယောက်ရှိတယ်။ အဲဒီလိုထူးချွန်တဲ့၊ ကြိုးစားတဲ့ သူမျိုးကို သင်ပေးပါတယ်” ဟု ပြောပြသည်။
ဗီယက်နမ်အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဟိုချီမင်း နှင့်အတူ တယောထိုးခဲ့ဖူးသည့် အမှတ်တရအား ပြန်လည် ပြော ပြသည့် ဦးတင်ရီက တယောထိုး သည့် ဂီတပညာရပ်နှ င့် ပတ်သက်ပြီး
“အသံလွှင့်ရုံမှာကျွန်တော် အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။ အသံလွှင်ရုံ A ခန်းအတွင်းမှာ ကျွန်တော်တယောထိုးနေတဲ့အချိန် ဟိုချီမင်းက ဒီကိုလေ့လာ ရင်းနဲ့ ရောက်လာတယ်။ မင်း နဲ့ငါ တယောထိုးချင်တယ်ဆိုလို့ တယောတစ်လက်ယူပေးလိုက်တယ်။ ၁ဝ မိနစ်၊ ၁၅ မိနစ်လောက် တယောထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဟိုချီမင်းက ငယ်စဉ်တုန်းက ငါ တယောထိုးဖူးတယ်တဲ့။ တယောကို နည်းနည်းလေးထိုးတတ်ရင် တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာလွယ်သွားပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တယောကို နည်းနည်းလေးထိုးတတ်ရင် အလုပ်ဟူသမျှ စည်းကမ်းတကျ လုပ်တတ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တယောဟာ တကယ်တော့ လက်၊ပခုံးအကုန်လုံး ညီနေရမယ်။ တစ်ချက်လွဲသွားရင် တစ်ချက်အသံတိမ်းသွားတာပဲ။
စိတ်ကိုတည်ငြိမ် အောင်ထားပြီး တော့ နောက်ဆုံးဘိုးတံတစ်ဆွဲ တစ်ဆန့်ကို ကွေးတယ်။ ဆန့်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအသံကို ဥာဏ်နဲ့မြင်ေ အာင်ကျင့်ပြီး တော့မှ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဗဟု သုတဖြစ်ဖွယ်ပြောပြခဲ့သည်။
အမည်မသိ အမျိုးသားတစ်ဦးအား နောက်မှ(၁၂)ဘီးကားဖြင့် ဝင်တိုက်မိ၍ သေဆုံး
တောင်ငူ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၆
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ရေတာရှည်မြို့၊ ရန်ကုန်- မန္တလေး ပုံမှန်ကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၂၁၄/၇ နှင့် ၂၁၅/၀ အကြားတွင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ရန်ကုန်- မန္တလေးပုံမှန် ကားလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၂၁၄/၇ နှင့် ၂၁၅/၀ အကြားတွင် တောင်မှမြောက်သို့ လမ်းလျှောက်သွားသူ အသက် (၄၅) နှစ်ခန့်၊ အမည်မသိ အမျိုးသား တစ်ဦးအား ၄င်းလမ်းအတိုင်း မောင်းနှင်လာသော ဇင်မင်းထွန်း (၂၃) နှစ်၊ (ဘ) ဦးဟန်တင်၊ ညောင်ပင်ခြံ ကျေး၇ွာ၊ ခင်ဦးမြို့နေသူ မောင်းနှင်လာသော ၉ခ/ ၃၈၂၇ နီဆန်းဒီဇယ် အဖြူရောင် (၁၂) ဘီးယာဉ်မှ နောက်မှ ဝင်ရောက် တိုက်မိသဖြင့် အမည်မသိ အမျိုးသားတွင် ဦးခေါင်း ကြေမွဒဏ်ရာ၊ ဝဲ/ ယာခြေကျိုး ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည်။
ဇင်မင်းထွန်းအား ရေးယူပေးပါရန် ရဲအုပ်ကျော်ကျော်ဝင်းမှ တရားလိုပြုလုပ် တိုင်တန်းသဖြင့် ရေနီနယ်မြေ ရဲစခန်းမှ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၄-က အရအမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက် ထားရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရန်ဖြစ်နေစဉ် ၀င်ရောက်ဖျန်ဖြေပေးသည့် ညီမကို အစ်ကိုဖြစ်သူ၏ဓါးဖြင့် ထိုးမိခဲ့၍ သေဆုံး
၂၅.၂.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၂၁၃၀ အချိန်ခန့်တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ကုလားကြီးစုရွာ၊ ပုလဲလမ်းထိပ်ရှိကုန်စုံဆိုင်အနီး၌ ၎င်းရွာနေ မောင်မျိုး(ခ)ဇော်မျိုးမှာ ကုန်စုံဆိုင်ဘေးလမ်းကြားသို့ လမ်းမှားဝင်သည့် ကိစ္စဖြင့် ကုန်စုံဆိုင်မှ ကိုကျော်မိုးနှင့်စကားများကြပြီး လုံးထွေးသတ်ပုတ် နေကြသဖြင့် မောင်မျိုး(ခ)ဇော်မျိုး၏ညီမများဖြစ်သော မငြိမ်းငြိမ်းအေးနှင့် မသန္တာထွေးတို့မှ ၀င်ရောက်ဖျန်ဖြေပေးခဲ့ကြပါသည်။
ထိုသို့ ဖျန်ဖြေပေးနေစဉ် မောင်မျိုး(ခ)ဇော်မျိုးမှ အသင့်ပါလာသောဓါးဖြင့် ကိုကျော်မိုးကိုထိုးခဲ့ရာ ကိုကျော်မိုး အားမထိုးမိဘဲ ညီမဖြစ်သူမသန္တာထွေး၏ ယာဘက်ရင်သားအောက်ကိုထိုးမိသွားခဲ့သဖြင့် လှိုင်သာယာဆေးရုံသို့
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မောင်မျိုး(ခ)ဇော်မျိုးအား သောင်ကြီးနယ်မြေ ရဲစခန်း (ပ)၁၃၁/၂၀၁၄၊ ပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူကာ ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အိန်္ဒိယ နိုင်ငံ မှာရှိတဲ့ နွားတစ်ကောင် ဟာ ခြေထောက် ငါးချောင်း ပါဝင် ခဲ့ပါ တယ်။ ဒီ နွား ဟာ အ သက် လေးနှစ် အရွယ် ရှိနေ ပြီ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီနွား ရဲ့ပိုင်ရှင် ဖြစ်သူ အသက် (၃၅) နှစ် အရွယ် ရှိ လာ့စ် မန်း ဟာ ထူးခြား တဲ့နွား ကို အိန်္ဒိယ နိုင်ငံ တစ်ဝန်း လှည့် လည် ပြသမှု ပြု လုပ်ခဲ့ တယ် လို့ သိ ရ ပါတယ်။ ဟိန်္ဒိူ ဘာ သာ ကို ကိုးကွယ်တဲ့ အိနိ်္ဒယနိုင်ငံမှာ နွားတွေကို အ မြတ်တနိုး ထား လေ့ ရှိပါတယ်။ သာမန်နွား တွေဟာ ခြေ ထောက် လေးချောင်းသာ ပါရှိခဲ့ ပေမယ့် လာ့စ်မန်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နွားကတော့ ခြေထောက် ငါးချောင်းအထိ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အိန်္ဒိယနိုင်ငံသားအများစုဟာ ခြေထောက် ငါးချောင်း ပါတဲ့နွားကို နတ်ဘုရား ဖန် ဆင်း ပေးလိုက်တဲ့နွားအဖြစ် ယုံကြည်ယူဆ ပြီး ကိုးကွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနွားရဲ့ ခြေထောက် တစ် ချောင်း အပိုဟာ ကျောပေါ်မှာ ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနွားရဲ့ ပိုင်ရှင် ဖြစ်သူ လာ့စ်မန်းက ကျွန်မရဲ့နွားကို နတ်ဘုရားတွေက ဖန်ဆင်း ပေးလိုက် ခြင်းဖြစ် ပါ တယ်။ ခြေထောက် တစ် ချောင်း အပိုပါ ခြင်း ဟာ အရမ်း ကို ထူးခြားမှု ရှိပါတယ်။ ကံကောင်းမှုတွေ ယူဆောင် လာ ပေးမယ့် လက်္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်””လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ လာ့စ်မန်းဟာ အိန်္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ပြည် နယ် ကြီးခြောက်ခုကို ဖြတ် သန်းပြီး အဓိကမြို့ကြီး(၁၅) မြို့မှာ ထူးခြား တဲ့နွားကို ပြသ မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မြို့ ကြီး တွေကိုရောက်တဲ့အခါတိုင်း လူပေါင်း များစွာ ဟာ ဒီနွားကို အံ့အား သင့်စွာ ၀ိုင်းဝန်း ကြည့်ရှု လေ့ရှိကြ ပါ တယ်။ ဒီနောက် အိန်္ဒိယ လူမျိုး တွေဟာ လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ် လို့ဆို ပါတယ်။ လာ့စ်မန်းက ကျွန်မ အ နေနဲ့ မြို့ပေါင်းများစွာကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီး ဖြစ် ပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ ထူးခြားတဲ့နွားကို အရို အသေ ပေး မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်မ အနေနဲ့ လူသားတွေအားလုံး အကျိုးရှိစေဖို့ ထူးခြားတဲ့ နွားကို မြင်တွေ့ ခွင့်ရ ရေး ပြုလုပ်ပေး နေရတာဖြစ်ပါတယ်””လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါ တယ်။ ခြေထောက် ငါးချောင်း ပါတဲ့ နွားဟာ လက် ရှိ အချိန်မှာ အိန်္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် နယူး ဒေလီကို ရောက်ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ By The Messenger
တူရိယာတစ်ခုခုနဲ့ နေ့တိုင်းမထိရရင် မနေနိုင်တဲ့ ဖိုးကာ
တူရိယာတစ်ခုခုကို တီးခတ်တတ်ခြင်းဟာ သီချင်းရေးတဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူပြုပြီး မတီးတတ်ပါက သီချင်းထပ် တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုလာသူကတော့
" ပါးစပ်နဲ့ပဲ စိတ်နဲ့ပဲရေးလာတဲ့ အခါမှာ ရှေ့ပိုင်းရေးတဲ့ အား တွေကတော့ ကောင်းတာပေါ့။ နောက်ပိုင်းရေးတဲ့သီချင်းတွေမှာ ပုံစံတူလာနိုင်တယ်။
တူရိယာတစ်ခုခုကိုတီးတတ်မှ တခြားပုံစံကွဲသီချင်းမူကွဲတွေ ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ တချို့ ယောက်ျားလေးတွေမှာ လည်း တွေ့ဖူးတယ်။
အဆိုတော်တော် ကောင်းပေမယ့်အတီးမှာကျတော့ ကောင်းကောင်းမတီးတတ်တာတွေ့ဖူးတယ်။ အဲ့ဒီတော့ သီချင်းရေးနိုင်မှု အားနည်းနိုင်တာပေါ့။ နောက်တစ်ခုက Music Frame တွေက
ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ ဒီထဲမှာ ကောက်စွပ်လိုက်တာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေက ရေရှည်အတွက်တော့ မကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်။ ကြာလာတဲ့အခါကျရင် သံစဉ်တွေ ပုံစံတွေတူလာနိုင်တယ်။ သိပ်အများကြီးလုပ်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။ အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့မှ တူရိယာတစ်ခုခုကို လေ့လာစေချင်တယ်" လို့ ဖိုးကာက
တူရိယာတစ်ခုခုတီးတတ်ဖို့လို ကြောင်းကို ပြောပါတယ်။
တေးသံရှင်ဖိုးကာအနေနဲ့ အမြဲ ထိတွေ့ဖြစ်တဲ့ တူရိယာပစ္စည်းကတော့ ဂစ်တာလို့လည်း သိရတာကြောင့် အဲဒီအကြောင်းကို " များသောအားဖြင့်ကတော့ ဂစ်တာပေါ့။
ဂစ်တာကတော့ တစ်နေ့မဟုတ်တစ်နေ့လက်နဲ့ ထိ နေရမှနေသာထိုင်သာရှိတာ။ လက်ကလေးနဲ့ ကြိုးကလေးနဲ့ ထိရတဲ့အရသာကိုတအား သဘောကျတယ်။
တစ်နေ့တစ်ကြိမ်တော့ ပုံမှန်ထိတွေ့ ဖြစ်တယ်။ ဒရမ်တို့ဘာတို့ကတော့ တီးပေမယ့် အိမ်က လူတွေဆူညံမှာ စိုးလို့မတီးဖြစ်ဘူး" လို့ ဖိုးကာက ပြောပါတယ်။တူရိယာတစ်ခုတီးခတ်တတ်ထားခြင်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအတွက် အနည်းဆုံးတော့ စိတ်အပန်း ဖြေမှုရစေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ဖိုးကာက "
အနည်းဆုံးတော့ နာရီဝက် တစ်နာရီတော့ relex ဖြစ်စေတယ်။ ဝါသနာမပါရင်တော့ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ဂစ်တာလေးတီးတတ်နေတာ။ စန္ဒရား လေးတီးတတ်နေတဲ့ အပေါ်မှာ အပန်းဖြေလုိ့ရတယ်" လို့ ပြောပါတယ်။
ဖိုးကာက လတ်တလောမှာတော့ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် စီးရီး အိပ်မက်(၁)၊ အိပ်မက် (၂) VCD ထုတ်ဖို့ကိစ္စကို နောက်ခွေနဲ့မှ တွဲထုတ်မလား၊ တစ်ခါ တည်းပေါင်း ထုတ်မလား ဆိုတာကို စဉ်းစားနေပြီး VCD ကိုတော့ သီချင်းအားလုံးမရိုက်ဖြစ်ဘဲ Hit ဖြစ်တဲ့ သီချင်းတွေ လောက်သာ MTV အနေနဲ့ ထုတ်ဖြစ်မယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
1. တပည့်(မ)လေးက ဗိုက်ထဲမှာ ရေအိတ်ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တခါတလေတော့ မခံမရပ်နိုင်အောင် နာတယ်ပြောပါတယ်။ မနာရင်တော့လဲ လူကောင်းအတိုင်းပါ။ ဆရာမကြီးတွေနဲ့ပြတော့ ခွဲခိုင်းပါတယ်တဲ့။
မခွဲပဲအဆင်ပြေစေမဲ့နည်းလမ်းများရှိရင်လဲ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ခွဲရစိတ်ရမှာလဲကြောက်တတ်တော့ မခွဲပဲကြာနေပါတယ်ဆရာ။ မခွဲပဲ ထားရင်ရော ကင်ဆာတွေ ဘာတွေအဆင့်ထိဖြစ်လာနိုင်ပါသလား ဆရာ
ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါအုံးဆရာ။ အခုတော့ သူရိုက်ထားတဲ့အနီးကပ်ဆုံး မှတ်တမ်းစာရွက်တွေကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
2. ဆရာရှင့် (၁) ကျွန်မ အသက် ၂၅ တုံးက ရေအိတ် ထုတ်ဖူးပါတယ်။ သားဥပြွန်တခုပါ ထုတ်လိုက်ရလို့ ယခု အသက် ၃၃ နှစ်မှာ ကလေးယူဖို့ လွယ်ကူနိုင်ပါသလား။ ဘာအခက်အခဲများ ရှိနိုင်ပါသလဲ။ နောက်နှစ်မှာ ကလေးယူဖို့အတွက် ခုချိန်မှာ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါး၊ ဘာတွေ ကြိုတင် မှီဝဲဖို့ လိုပါသလဲ။ (၂) ရေအိတ်က ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲ သေချာသိချင်ပါတယ်။ အပျို-အအို မရွေး အသက်အရွယ် မရွေး ဖြစ်နေတာကိုလဲ တွေ့နေရပါတယ်။ Ovarian Cyst လို့ ရေးထားပါတယ်။ မခွဲခင်က ဗိုက်မသိမသာလေး ပူပါတယ်။ နဂိုက ပိန်တဲ့လူဆိုတော့ ဝလာသလို ထင်ရတယ်။ ဗိုက်ဆာလို့ အစာစားမယ်ဆိုတော့ နဲနဲဘဲ စားရသေးတယ်၊ ဗိုက်က ပြည့်သွားပြီး၊ ဗိုက်တင်းသွားတယ်။ ဆက်စားချင်ပေမဲ့ မစားနိုင်တော့သလိုဖြစ်တယ်။ ရင်ပြည့်နေသလို ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလောက်ဘဲ ခံစားရပါတယ်။ အိတ်ထမတင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ကြည့်တော့လဲ ဘာမှမထူးခြားဘူး။ ဗိုက်ထဲမှာ အလုံးဖြစ်နေမလားဆိုပြီး။ စိုးရိမ်လို့ ဆေးခန်း သွားတော့မှ ရေအိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ ရေအိတ်ထဲမှာ အရည်နောက်နောက်တွေလို့ဘဲ ပြောပါတယ်။ တခြားဟာတွေ တွေ့တယ်လို့တော့ မပြောပါဘူး။ သားဥပြွန်မှာ သွေးကြောတွေ ရစ်ပတ်နေလို့ ရေအိတ် ထုတ်ရ ခက်တဲ့အတွက် အဲဒါပါ ထုတ်လိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တလောက ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ သူနာပြုဆရာမတယောက်ကနေ အလွန်ကြီးမားတဲ့ အလုံးတခုကို ခွဲစိတ်ခန်း နောက်ခံထားပြီး ရိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံနဲ့အတူ ‘လူဥ’ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တွေ့လိုက်သေးတယ်။ ‘လူဥ’ မဟုတ် ‘မျိုးဥအိမ်အကျိတ်’ ပါလို့ ရေးလိုက်ပါတယ်။ ပြန်ရှာနေတာ မတွေ့သေးလို့။ ပဌမမေးခွန်းမှာ ‘မ’ မပါလို့ တပည့်က ယောက်ျားလေးလား၊ မိန်းကလေးလားမသိရသေဘဲ မေးခွန်းကိုဆက်ဖတ်နေခဲ့ရတယ်။ ဆေးစာထဲမှာတော့ နာမည်ရော၊ အသက်ရောပါလို့ ‘မ’ ထည့်လိုက်တာပါ။
စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုကို ဖြတ်လိုက်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းလို မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်ဆိုရင် ဖြတ်တောက်ဖို့ ပိုတောင်ခက်ခဲပါဦးမယ်။ အမျိုးသားကင်ဆာ ဌာနကနေ ဆေးလိပ်ပြတ်အောင်
ဘာမင်ဂမ်အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသည့် အဖြစ်မျိုး ထပ်မံ အဖြစ်မခံနိုင်ကြောင်း အသင်းဖော်များကို သတိပေးလိုက်သည့် နာစရီ
မန်ချက်စတာစီးတီး ကွင်းလယ်ကစားသမား ဆင်မာ နာစရီဟာ လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကစားမည့် ကပ်ပီတယ်ဝမ်းဖလား ဖိုင်နယ်မှာ ဆန်းဒါးလန်းအသင်းကို ရှုံးနိမ့်လို့ မဖြစ်ကြောင်း အသင်းဖော်များကို သတိပေးပြောကြားလိုက်သည်။ နာစဆီဟာ အာဆင်နယ်ကစားသမားအဖြစ် ကစားခဲ့စဉ်က ဘာမင်ဂမ်အသင်းကို ကာလင်းဖလား ဖိုင်နယ်မှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ဖူးသည့် အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့ဖူးပြီး ထိုစဉ်က ရလာဒ်မကောင်းခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံအရ ယခုတစ်ကြိမ် ထပ်မံ အဖြစ်မခံနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နာစရီက “ကျနော် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တုန်းက အာဆင်နယ်အသင်းနှင့် ကာလင်းဖလား ဖိုင်နယ်မှာ ဘာမင်ဂမ်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ ရှုံးပွဲ နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ အမှတ်ပေးဖလားပြိုင်ပွဲမှာ နိုင်ပွဲ ၂ ပွဲပဲ ရခဲ့တာပါ။ ဒီတော့ နိုင်ပွဲ ရဖို့ ကျနော်တို့အတွက် တကယ်အရေးပါနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒါမှ ယုံကြည်မှုတွေ ပြန်ရနိုင်မှာပါ။”
“ကျနော် ကလပ်အသင်းတွေနှင့်အတူ ဝင်ဘလေမှာ ကစားခဲ့ရတဲ့ ပွဲတွေမှာ မှတ်တမ်းကောင်းတွေ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဖိုင်နယ်ပွဲတွေမှာ ကျနော် အာဆင်နယ်အသင်းနှင့်အတူ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ဖူးသလို မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းနှင့်လည်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံ့လက်ရွေးစင်အသင်းနှင့်တော့ အင်္ဂလန်အသင်းကို အဲ့ဒီကွင်းမှာ အနိုင်ရခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီလို နိုင်ပွဲမျိုး ထပ်ရလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် မျှော်လင့်ထားပါတယ်။” ဟု ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒါပေမဲ့ တခြား ကျွမ်းကျင်သူတွေက ထုတ်ကုန်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ Triclosan အဆင့်ဟာ အန္တရာယ် ကင်းတယ်လို့ဆိုပြီး ကြွက်တွေကို ဆေးထိုးပေးတဲ့ ပမာဏဟာ လူတွေ ထိတွေ့တဲ့ ပမာဏထက် မြင့်မား နေတာကြောင့်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေကတော့ အဲဒီဓာတု ပစ္စည်းတွေဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ တွင်းရောက်ရှိနိုင်ပြီး အင်္ဂါတွေကို ဖျက်ဆီး ပစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ကောင်းသူတွေ အနေနဲ့ နှလုံးလုပ်ငန်း ဆောင်တာ ၁၀ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျ သွားတာဟာ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပေမယ့် နှလုံးရောဂါ ရှိသူတွေအနေနဲ့ အလွန် ကွာခြား သွားနိုင်ပါတယ်။
တခြား လေ့လာမှုအရလည်း အဲဒီဓာတုပစ္စည်းတွေကို ထိုးပေးပြီး တစ်နာရီအတွင်းမှာ ကြွက်တွေရဲ့ ကြွက်သားကို အသုံးချနိုင်အားဟာ ၁၈ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းသွားပြီး ထိုကျဆင်းနှုန်းဟာ တစ်နေ့လုံး ဖြစ်နေပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အီးယူရဲ့ ဥပဒေအရကို အလှကုန် ပစ္စည်းနဲ့ သွားတိုက်ဆေး တွေမှာ ၀ဒသမ ၃ရာခိုင်နှုန်းထိ ပါဝင်ခွင့် ပေးထားကြောင်း သိရပြီး ဒီလေ့လာမှုကို အမျိုးသား အကယ်ဒမီ သိပ္ပံမှ ထုတ်ဝေတဲ့ ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒရော့ဂ်ဘာကို တစ်ကျော့ပြန် ကမ်းလှမ်းဖွယ် ရှိနေသည့် ချယ်လ်ဆီး
ချယ်လ်ဆီး အသင်းသည် ဂန္ထဝင် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဒီဒီရာဒရော့ဂ်ဘာကို ပြန်လည် ခေါ်ယူရန် စီစဉ်လျှက် ရှိကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ် လာခဲ့သည်။
ချယ်လ်ဆီး၏ သမိုင်းဝင် ပထမဆုံး ချန်ပီယံလိဂ် ဆုဖလားကို ရယူခဲ့စဉ်က အထူးတလည် ဦးဆောင်မှု ပေးခဲ့သော အိုင်ဗရီကို့စ် လက်ရွေးစင်သည် မတ်လတွင် အသက်(၃၆)နှစ် ပြည့်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် တူရကီ ကလပ် ဂါလာတာဆာရေးနှင့် အတူ ယခု သီတင်းပတ်တွင် ချယ်လ်ဆီးကို ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက်ပွဲစဉ် အဖြစ် ဧည့်ခံရန် ပြင်ဆင်လျှက် ရှိသည်။ လက်ရှိ ချယ်လ်ဆီး တိုက်စစ်မှူးများသည် အကောင်းဆုံး ဂိုးသွင်းစွမ်းရည် မရရှိဘဲ ရုန်းကန် နေရချိန်တွင် ဒရော့ဂ်ဘာကမူ အသက်အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် တိုးအား၊ ဂိုးသွင်း စွမ်းရည်ကောင်းများ ပိုင်ဆိုင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
ချယ်လ်ဆီး မန်နေဂျာ ဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုသည် အသင်းကို ၎င်းပထမအကြိမ် ကိုင်တွယ်စဉ်က ဒရော့ဂ်ဘာကို ခေါ်ယူခဲ့ပြီး ကစားသမားနှင့် ရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုတစ်ဖန် မော်ရင်ဟိုသည် ဒရော့ဂ်ဘာကို တစ်ကျော့ပြန် ခေါ်ယူရန် ဆန္ဒရှိနေပြီး အသင်းပိုင်ရှင် ရိုမန်အေဗရာမိုဗစ်ခ်ျ ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဆိုပါ အစီအစဉ်အတွက် လိုလိုလားလား ကူညီဖွယ် ရှိနေကြောင်း သတင်းများက ဆိုသည်။ ချယ်လ်ဆီးတွင် ဒရော့ဂ်ဘာ ကစားနေစဉ်က ချယ်လ်ဆီးသည် အခြားတိုက်စစ်မှူးများ ဖြစ်ကြသည့် ဖာနန်ဒိုတောရက်စ်၊ အေဒရီယန်မူတား၊ အန်ဒရီရှက်ဗ်ချန်ကို၊ ဟာနန်ခရက်စ်ပို၊ နီကိုလက်စ် အနယ်လ်ကာတို့ကို ပေါင်စတာလင် သန်း(၁၅၀)မျှ အကုန်အကျခံ ဝယ်ယူခဲ့သော်လည်း ဒရော့ဂ်ဘာလောက် တစ်ဦးမျှ တောက်တောက်ပပ ဖြစ်မလာခဲ့ကြချေ။
ချယ်လ်ဆီးအနေဖြင့် နွေရာသီတွင် အဓိက တိုက်စစ်ကစားသမားသစ် တစ်ဦးခေါ်ယူရေးကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ဖွယ် ရှိနေပြီး ထိပ်တန်းကြယ်ပွင့်တစ်ဦးကို ဈေးကြီးပေး ခေါ်ယူဖြစ်သည့်တိုင် ဒရော့ဂ်ဘာအတွက်လည်း ကြိုးစားချိတ်ဆက်ဖွယ် ရှိနေကြောင်း သိရှိရသည်။
ကုန်တင်ယာဉ်မှ ခရီးသည်တင်ယာဉ်အား နောက်ဖက်မှတိုက်မိခဲ့သဖြင့် (၁)ဦးသေ၊ (၃)ဦးဒဏ်ရာရ
၂၃.၂.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၉၃၀ အချိန် လှည်းကူးမြို့နယ်၊ အမှတ်(၂) လမ်းမကြီးအတိုင်း ဇရပ်ကွင်းရွာဘက်မှ ဆားတလင်းကျေးရွာဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း အောင်ဆန်းကြည်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေသူ မောင်းနှင်လာသော 4A---- နစ်ဆန်းဒီဇယ် (၁၂)ဘီးကုန်တင်ယာဉ်သည် မိုင်တိုင်အမှတ် (၂၆/၄)အနီးအရောက်တွင် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ဆည်မြောင်းမှတ်တိုင်၌ ခရီးသည်တင်/ချပြုလုပ်နေ သော လှည်းကူး-ဒါးပိန်-သင်္ဃန်းကျွန်း ပြေးဆွဲသည့် 6A---- ခရီးသည်တင် ဒိုင်နာယာဉ်၏ နောက်ဖက်အား ၀င်ရောက်တိုက်မိခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် 6A---- ယာဉ်ပေါ်ပါ ခရီးသည် ခလရ(၇၂) လွိုင်ကော်မှ ဗိုလ်ကြီးစောနိုင်ဟိန်းမှာ ယာခြေသလုံးကျိုး၊ ကျောပြင်ညိုမဲ ဒဏ်ရာများရရှိကာ အခင်းဖြစ်နေရာ၌ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး အခြားခရီးသည် (၃)ဦးတို့တွင် ဖူးရောင်၊ နာကျင်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သဖြင့် ဒါးပိန်ဆေးရုံ၌ ပြင်ပလူနာများအဖြစ် ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရပါသည်။
ယင်းသို့ ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်းနှင်သူ ကုန်တင်ယာဉ်မောင်း အောင်ဆန်းကြည်အား ဒါးပိန်နယ်မြေရဲစခန်း ယာဉ်(ပ)၃/၂၀၁၄၊ ပုဒ်မ ၃၃၇/၃၀၄-က ဖြင့်အမှုဖွင့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၂၂.၂.၂၀၁၄ ရက်နေ့၂၁၃၀ အချိန်တွင် အင်းစိန်မြို့နယ်၊ မြို့သစ်(က+ခ) ရပ်ကွက်နေ ကိုထက်ဝေယံသည် နေအိမ်ရှေ့၌ ဖုန်းပြောနေစဉ် ယခင်က စက်ဘီးငှားသည့် ကိစ္စဖြင့် စကားများခဲ့ဖူးပြီး ၎င်းအားမကျေမနပ်ဖြစ်နေ သော တစ်ရပ်ကွက်တည်းနေ ဦးလေးတော်စပ်သူ ဦးနိုင်ဝင်းမှ သံတုတ်အားခါးကြားတွင်ထိုး၍ ယူဆောင်လာသည်ကို ကိုထက်ဝေယံ၏ ဖခင်ဦးသန်းအောင်မှတွေ့မြင်သဖြင့် ဦးနိုင်ဝင်းထံသွား ရောက်ကာ လုံးထွေးသတ်ပုတ်စဉ် ဦးနိုင်ဝင်းမှ သံတုတ်ဖြင့်ရိုက်ခဲ့၍ ဦးသန်းအောင်တွင် နဖူးဝဲဘက်၊ နှာခေါင်း၊မေးစေ့တို့၌ ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများ ရရှိကာ သတိလစ်လဲကျသွားပြီး သေဆုံးသွားသောကြောင့် ကိုထက်ဝေယံမှ အရေးယူပေးပါရန် တိုင်တန်းခဲ့ရာ ဦးနိုင်ဝင်းအား အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်း (ပ)၁၈၆/၂၀၁၄၊ ပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့်အမှုဖွင့် အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ပါသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် အပြန်အလှန်လုံးထွေးသတ်ပုတ်ကြရာ၌ ဦးနိုင်ဝင်းတွင် ၀ဲ/ယာလက်မောင်းနာကျင်၊ ၀ဲ/ယာချိုစောင်းပေါက်ပြဲ၊ ၀ဲမျက်ခုံးပွန်းခြစ် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီး အင်းစိန်ဆေးရုံတွင် အတွင်းလူနာ (မစိုးရိမ်ရ)အဖြစ် တက်ရောက်ကုသခဲ့ရသောကြောင့် ဦးနိုင်ဝင်းမှ အရေးယူပေးပါရန် တိုင်တန်းခဲ့ရာ ကိုထက်ဝေယံနှင့် ဦးသန်းအောင်(သေဆုံး)တို့အား အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်း(ပ)၁၈၇/၂၀၁၄၊ ပုဒ်မ ၃၂၅/ ၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
K pop ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အာရှကို လွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အမျိုးသမီး တေးဂီတအဖွဲ့တွေရဲ့ အလွန်အကျွံ လိင်ဆွဲဆောင်မှု အသားပေး ဖျော်ဖြေမှုတွေကို ကန့်သတ်နိုင်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ soompi.com မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကွန်ဒုံးများသည် သန္ဓေတား ဆီးရန်နှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှ တစ်ဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါ များကို ကာကွယ် တားဆီးရာ၌ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း ထိရောက်မှု ရှိသော်လည်း ယင်းကို စနစ်တကျ မှန်ကန်စွာ
အသုံးပြုတတ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ပညာရှင်များက သတိပေး လိုက်သည်။ ကင်းဆေးတက္ကသိုလ် ကွန်ဒုံး အသုံးပြုမှု သုတေသန အဖွဲ့က ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ဆောင်းပါး ၅၀ ကျော်အပြင် ဗြိတိန်၊ အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါတို့ အပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်း ၁၄ နိုင်ငံမှ လေ့လာချက် များကို လေ့လာ ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ကွန်ဒုံး အထုပ်ကို ဖောက်ရာတွင် ချွန်ထက်သော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်း၊ ကွန်ဒုံးကို အလွန် နောက်ကျမှ ချွတ်ခြင်း၊ ကွန်ဒုံးကို အလွန်စောစွာ ချွတ်ခြင်းနှင့် ရေကို အခြေခံသော ချောဆီများ အသုံးပြုရန် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ အပါအ၀င် မှားလေ့ မှားထရှိသည့် အမှားများစွာကို တွေ့ရှိ ခဲ့ကြသည်။ ယခု လေ့လာချက်များတွင် တစ်လင် တစ်မယား စနစ် ကျင့်သုံးသည့် လက်ထပ် ထားသည့် စုံတွဲ များမှသည် ပြည့်တန်ဆာများ အထိ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
လမ်းပြောင်းပြန် မောင်းနှင်လာသောယာဉ်မှ အခြားယာဉ် (၃)စီးအားတိုက်
၂၀.၂.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၂၀၃၀အချိန် စမ်းချောင်းမြို့နယ်နေ ထက်အောင်ရှိုင်း၊ (ဘ)ဦးစိုးနိုင်သည် ၈ဂ/--- လိုက်ထရပ် အဖြူရောင်ယာဉ်အား မြေနီကုန်းတောင်ရပ်ကွက်၊ ဓမ္မာရုံလမ်း အတိုင်း လမ်းပြောင်းပြန် မောင်းနှင်လာရာ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ အမှတ်(၅၉)ရှေ့တွင်ရပ်ထားသော CC/----ပရိုဘောက်အဖြူရောင် ယာဉ်အားတိုက်မိပြီး ယာဘက်သို့ဆွဲရှောင်စဉ် ၎င်းလမ်းအတိုင်း ယာဉ်မောင်း ဦးအာကာမင်း မောင်းနှင်သည့် 2E/----ပရိုဘောက်
အဖြူရောင်ယာဉ်အားတိုက်မိကာ ဆက်လက်မောင်းနှင်သွားစဉ် ဗားကရာလမ်းနှင့် ဗိုလ်မိုးလမ်းထိပ်အရောက် ယာဉ်မောင်း ဦးထွန်းလွင်မောင်းနှင်သော ၄စ/----ပရိုဘောက် ခဲရောင်ယာဉ်အား ထပ်မံတိုက်မိခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ယာဉ်(၄)စီး ပိန်ချိုင့်ပျက်စီးခဲ့သဖြင့် ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်းနှင်သူ ထက်အောင်ရှိုင်းအား စမ်းချောင်းမြို့မရဲစခန်းယာဉ်(ပ)၃/၂၀၁၄၊ ပုဒ်မ ၂၇၉ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ထားရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၂၀.၂.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၁၆၄၀အချိန် သာကေတမြို့နယ်၊ ယမုံနာလမ်းအတိုင်း သာကေတဘက်မှ သန်လျင်ဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း စိုးရန်နောင်(ဘ)ဦးလှညွန့်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် နေသူ မောင်းနှင်လာသည့် ယာဉ်အမှတ်-----တိုယိုတာပရာဒို ခဲရောင်ယာဉ်သည် မြင်တော်သာလမ်းထိပ် ဂိတ်ဟောင်းမှတ်တိုင်
အနီးအရောက် ၎င်း၏ရှေ့မှယာဉ်အားကျော်တက်စဉ် ကိုငယ်လေးချို (ဘ)ဦးသိန်းမောင်၊ သာကေတမြို့နယ်နေသူ စီးနင်းလာသော ဆိုက္ကားနှင့် ကိုကြည်ဝင်း (ဘ)ဦးအေးလွင် သာကေတမြို့နယ်နေသူ စီးနင်းလာသော စက်ဘီးတို့အားတိုက်မိခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ကိုငယ်လေးချိုနှင့် ဆိုက္ကားပေါ်ပါ ဒေါ်ရီရီထွန်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ်နေသူ တို့တွင် ဒဏ်ရာများရရှိကာ အခင်းဖြစ်နေရာတွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပြီးဆိုက္ကားပေါ်ပါ မနွေးယွန်းဖြူ (ဒေါ်ရီရီထွန်း၏သမီး)နှင့်စက်ဘီးစီးနင်းလာသူ ကိုကြည်ဝင်းတို့တွင် ပွန်းပဲ့နာကျင်ဒဏ်ရာများရရှိကာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်းလူနာ(မစိုးရိမ်ရ)များအဖြစ် ကုသရသောကြောင့် ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်းနှင်သူ စိုးရန်နောင်အား သာကေတမြို့မရဲစခန်းယာဉ်(ပ) ၁၀/၂၀၁၄၊ ပုဒ်မ ၂၇၉/၃၃၈/၃၀၄-က ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ထားရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။